Solberg oo ka hadashay kiisaskii barnevernka ee Norway looga guuleystay. - NorSom News
Solberg oo ka hadashay kiisaskii barnevernka ee Norway looga guuleystay.
Maxkamada xuquuqul insaanka Yurub ayaa shaley labo kiis oo cusub ku xukuntay dowlada Norway, gaar ahaan hey´adda barnevernka. Mid kamid ah kiisaskaa ayaa ahaa mid ka dhaxeeyay hooyo soomaali ah iyo hey´addaas oo mudo dhowr sano ah socday. Halkan kasii akhri.
Reysulwasaaraha Norway, Erna Solberg ayaa shaley shir jaraa´id oo ay qabatay si kooban uga hadashay kiisaska barnevernka ee dowlada Norway looga guuleystay.
Solberg ayaa sheegtay in xukunada iyo go´aamada maxkamada ay muujinayaan in loo baahanyahay kor u qaadista aqoonta dadka ka shaqeeyo barnevernka. Si kor loogu qaado tayada go´aamada ay qaadanayaan dadka ka shaqeeyo hey´adaas, dowladuna ay arintaas waqti badan horey u galisay.
Erna ayaa sheegtay inay muhiim tahay in kor loo qaado tayada aqoonta barnevernka, si ay u qaataan go´aano sharci ahaan waafaqsan xeerarka xuquuqda insaanka.
Reysulwasaaraha Norway ayaa muujisay in shaqada ugu weyn ee barnevernka ay tahay xaqiijinta waxa u fiican ilmaha.
Norway ayaa ilaa hada lagu xukumay sadex kiis ah oo kamid ahaa 35 kiis oo hey´adaas laga geeyay maxkamada xuquuqul insaanka.
Xigasho/kilde: Dommene i Strasbourg mot det norske barnevernet viser at det må jobbes enda mer med kvalitet og kompetanse i barnevernet.
Previous articleListhaug oo xil wasiir cusub mar kale loo magacaabay. Maka soo bixi kartaa?
Next articleUK: Mo Farah walaalkiis oo Soomaaliya dib loogu celiyay kadib xabsi uu dhameystay